Sida loogu daro ringtone caadadiisu macruufka 9 | Wararka IPhone
Sidee loogu daraa ringtone qaas ah macruufka 9
Waxyaabaha xiisaha u leh milkiileyaal badan oo casriga ah ayaa awood u leh inay dhigaan codad khaas ah. Su’aal aad inta badan na weydiiso ayaa ah sida loogu daro ringtone qaas ah macruufka 9. Jawaabta degdega ah iyo xoogaa qosol leh waxay noqon doontaa "waxay la mid tahay macruufka 8", laakiin ma ahan jawaabta aan dooneyno inaan ku siino, sidaas darteed waxaan ku bari doonaa afar habab oo kala duwan si aad u dejiso waxa aad ugu jeceshahay sida ringtone. In kasta oo aan ogaaday in qaar badan oo ka mid ah codadkaasi aysan u fiicnaan doonin sida aad filayso, laakiin sidoo kale waa run inay jiraan kuwo kale oo u qalma. Tilmaamahan waxaan soo jeedin doonaa afar siyaabo kala duwan si loogu abuuro ringtones aad iPhone.
1 Sidee loogu daraa ringtone qaas ah macruufka 9
1.1 Iyadoo iTunes ah
1.2 Iyadoo GarageBand
1.3 Iyadoo Audiko
1.4 Barnaamijyada ka socda App Store
2 Sida loo beddelo ringtone-ka WhatsApp ama Facebook
Iyadoo iTunes ah
Waxaan ku bilaabayaa qaabkan maxaa yeelay aniga waxay ila tahay midka ugu fudud waana ansax inagoo dhan oo rakibo iTunes, kuwaas oo ah OS X iyo isticmaalayaasha Windows.
Waxaan doorannaa hees ka iTunes.
Waxaan sameynaa cmd + io midig dhagsii heesta kadib war hel.
Aan tagno tabta fursadaha.
Waxaan muujineynaa barta bilowga iyo dhamaadka. Ugu badnaan 40s geli, in kastoo aan wax kayar hoos u dhigi lahaa.
Waan ciyaarnay aqbalaan.
Waxaan mar kale sameynaa cmd + io midig saxda, laakiin markan waxaan dooranay Abuur nooca AAC. Waan arki doonaa sida aan u nuqulno heesta, laakiin midka cusub wuxuu heli doonaa waqti aan ugu talagalnay tallaabada 3.
Waxaan jiidi cusub hees ilaa desktop.
Le waxaan ka badalnaa m4a ilaa m4r.
Waan sameynaa laba jeer guji feylka cusub waxaanan si toos ah ugu ridi doonaa qaybta Tones ee iTunes.
Ugu dambeyntii, si macquul ah, waxaan la shaqeyn doonnaa iPhone-keena.
Dhibaatada ugu weyn ee aan ku arko nidaamkan ayaa ah inaysan macquul aheyn in lagu daro fadeexad ama banaanka, wax u ogolaanaya codka inuu ka fiicnaado munaasabadaha qaarkood.
Tani waa habka aan doorbido. Muddo dheer ayaan "ku ciyaarayay" barnaamijka noocan ah aniga ahaanna waa waxa ugu fudud ee la sameeyo. Sidoo kale, maadaama GarageBand uu yahay barnaamij duuban oo dhan iyo tafatir ah, waxaan ku dari karnaa saameynta aan dooneyno, in kasta oo waxa ugu fiican ay tahay inaan ku darno oo keliya fade-ins iyo fade-outs.
Kahor intaanan sharxin hanaanka dheer ee inta badan aan isticmaalo, waxaan rabay inaan kuu sheego inay jirto wado labaad (taas oo dad badan u noqon laheyd tan ugu horeysa) si loo sameeyo cod GarageBand waana ka fudud yahay, laakiin ma jecli . Haa halkii aan ka dooran lahayn Mashruuca Faaruqa ah waxaan dooranaynaa Tone-ka tallaabada 2, waxaan u abuuri karnaa si ka dhakhso badan. Waxaan kaliya u baahnaan doonnaa inaan u soo jiidanno mowjadda (tallaabada 5) bilowga wax kasta, sii Share oo dooro "Heesta iTunes" .... GarageBand wuxuu si otomaatig ah u gooyn doonaa heesta inuu ka hooseeyo 40 ilbiriqsi.
Waxa aan badanaa sameeyo waa kuwan soo socda:
Waan furannaa Garageband.
Waxaan abuureynaa cusub Mashruuc madhan.
Waxaan ku doorannaa Duubista makarafoonka ama taleefoonka wax laga galiyo.
Waxaan gujineynaa Abuuri.
Waxaan codka ku jiideynaa daaqada gudaheeda GarageBand iyo waxaan u wareejineynaa hirka wax walba bilowgiisa.
Waxaan tafatirnaa codka. Si tan loo sameeyo, waxaan gujineynaa mowjadda laba jeer si aan u aragno tifaftiraha xagga hoose.
Haddii waxa aan dooneyno ay tahay inaan tirtirno waxa aanan dooneynin, kanaalka hoose, waxaan gujineynaa inta aan u dhaqaaqeyno tilmaame si aan u xusho gabal aan tirtirno (waxaan ku tirtirnaa cmd + X). Waxa aan sameeyo waa baabi'inta gabal yar oo ka dambeeya dhamaadka oo aan doonayo codkayga. Markaan tirtiro qaybtaas mawjada, daaqada kore ayaan durba ku baabi'in karaa inta hartay badhanka tirtirka.
Markaas waan awoodnaa abuur fawdo iyo libdho. Si tan loo sameeyo waxaan taaban doonnaa meesha aad ku aragto sawirka, taas oo noo oggolaan doonta inaan aragno khadka mugga. Markaa waxaan kugula talinayaa inaad sameyso laba qodob: mid meesha aan dooneyno inuu libku ka bilowdo iyo mid kale dhamaadka, sida aad ku arki karto sawirka.
Dhammaadka dhammaadka sumadda dhammaadka heesta aad bey u qarsoon tahay. Waa in saddexagal saddexagalkaas jabhadda ah u jiido dhamaadka wixii aan tafatirnay.
Waxa ku xiga waa inaad aado Share iyo xulo "Codadka Codadka ee iTunes ...". ITunes si toos ah ayuu u furi doonaa codka ayaa bilaabi doona inuu ciyaaro.
Hadda waa inaan kaliya u magacawno (haddii aan rabno) iTunes iyo ku dheji codka midkeenna iPhone.
Sida ay leedahay Felipe faallooyinka, sidoo kale waxaa jira degel si loo abuuro codad khaas ah. Waxaan qiyaasayaa inay intaas ka badnaan doonaan, laakiin waan isku dayay oo waxay umuuqataa mid fudud oo dhaqso leh in la isticmaalo. The mareegtu waa Audiko sidoo kale waxay leedahay codsi App Store ah, laakiin waa inaad codka la wadaagtaa iTunes ka dibna ku soo celisaa iPhone-ka. Haddii ay tahay inaad isticmaasho kumbuyuutarka, waxaa fiican inaad si toos ah uga sameyso shabakadda. Si aad ugu abuurto cod aaladda Audiko waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Aan tagno bogga http://es.audiko.net
Waxaan gujineynaa Load.
Waxaan dooranaynaa heesta taas oo aan dooneyno inaan ka soo saarno codka.
Markaan dhammeeyo rarka, waxaan ka dhaqaaqeynaa geesaha hoose si aan u doorano qaybta aan dooneyno, iyadoo la xasuusto inay tahay inay ka yaraadaan 40 ilbiriqsi.
Waxaan muujineynaa, haddii aan rabno, ka bax oo ka bax.
Waxaan gujineynaa "Abuur cod-dhawaaq"(Taasi waa waxa aan akhriyay, ma ogi inay khalad iga timid aniga ama shabakadda).
Kadibna waxaan doorannaa iPhone.
Waxaan gujineynaa Drar.
Ugu dambeyntii, sida had iyo jeer, waxaan ku dhejineynaa codka iPhone-ka iyada oo loo marayo iTunes.
Barnaamijyada ka socda App Store
Waa wax shaqsiyan aanan waligay qaban ama u malayn maayo inaan waligay ku samayn doono nidaamka GarageBand, laakiin waxaan kaga faaloonayaa ikhtiyaar ahaan. Waxaan kaliya u baahanahay inaan ka raadino "ringtones", "Ringtone maker", "Abuur codad" iyo waxyaabo la mid ah App Store waxaadna ku arki doontaa tan codsiyo ah. Waxaa jira bilaash badan, badankood, laakiin leh xaddidaadyo iyo shaqooyin yar, ku dhowaad dhammaantood. Sidii aan idhi, waxaan ku xusaa ikhtiyaar ahaan, laakiin waxay u badan tahay inaan adeegsan doonno iTunes haddii aan haysanno iPhone, sidaa darteed uma maleynayo inay tani tahay xulashadaada aad doorbideyso. Waxaan kaaga tagayaa labada ugu isticmaalka badan.
Waa kuwan liistada codadka aan sameeyay naftayda iyo qaar la codsaday:
Waxaan ahay albatraoz
Birta Dragon Ball
Dragon Ball Z Birta
Alex Kidd Hordhac
Alex Kidd oo wax cunaya
Sida loo beddelo ringtone-ka WhatsApp ama Facebook
Wixii Cbeddel codka Wharsapp, Waa inaad tagtaa Settings-ka WhatsApp laftiisa, ogeysiisyada Fariin cusub ama fariin kooxeed, halkaas ayaad ku badashay codka.
Mid ka mid ah Facebook Waxaa lagu beddeli karaa gudaha goobaha IOS, halkaas waxaad ku heli doontaa ikhtiyaar aad ku beddeli karto codka ogeysiisyada codsiyada kala duwan
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sidee loogu daraa ringtone qaas ah macruufka 9
AndoDayaanna ( dijo
Casharro aad ufiican, si aad ufiican loogu sharaxay talaabo talaabo. Waxaan isku dayi doonaa Garage, illaa iyo hadda waxaan ku sameeyay iTunes sida aad u sharaxdo habka ugu horreeya.
Sikastaba ha ahaatee waxaan wali u arkaa wax aad u murugo badan in Apple uusan u ogolaanin "asal ahaan".
Pablo, waxaan u maleynayaa inaad tahay qoraha ugu fiican illaa iyo hadafka ugu badan, sii wad, fadlan.
Jawaab Fernando (@Garza_Real)
Casharro aad u wanaagsan illaa iyo hadda waxaan u isticmaalaa audiko websaydhkooda, waxaan ku soo dejiyaa kombuyuutarka oo aan ku hagaajiyaa iTunes. salaan
Waad salaaman tahay Felipe. Waxay umuuqataa ikhtiyaar kale oo wanaagsan. Oggolaanshahaaga, ayaan kuugu darayaa 😉
fadlan pablo, wax kasta oo waxtar leh waa in lala wadaago. salaan
Haddii aad isticmaaleysid JAILBREAK aad si fudud ayey u leedahay ... oo aan caadi ahayn.
Waxa kale oo aad kala soo dejisan kartaa iyada oo aan la helin on iPhone jailbroken oo aad u wareejin kartaa pc-ka oo leh barnaamijyo nooca itools ah, ka dibna waxaad iyaga kula jaanqaadi kartaa iTunes-ka iyo codadkaasi waxay ansax u yihiin iPhone kasta oo aan JAILBILBILA ...
Buaaaa badanaa tostón iyo in uusan ii sharixin sida aan doonayo.
Gerardo sanchez dijo
Talaabada ugu horeysa wali ma shaqaysaa? Kuwaas ayaan ku sameeyaa MAC-kayga oo laba jeer ayaan gujiyaa faylka m4r-na wuxuu ku ciyaaraa MUSIC
Qof ma ii sharixi karaa sababta ay tani u dhaceyso?
Jawaab Gerardo Sanchez
Wax badan oo loogu talagalay ringtone jaban
macluumaad been ah ma jiro ikhtiyaar Abuur nooca AAC
Waxaan iibsaday IPhone SE oo talaabooyinkaas MA AHA suurta gal. Fursadaha ka muuqda daaqadaha la soo bandhigay maaha kuwa ...
Iyo liiska codadka oo madhan, ma haysto ikhtiyaar aan ku waafajiyo ama ma nuqulan karo oo ku dhejin karo ringtone ka dib markaan jaray oo aan maareeyo beddelka kordhinta rm4
Waxa ugu fudud ayaa ku jira barnaamijka Twistedwave, xitaa wuxuu furi karaa fiidiyowyo mp4 ah oo maqal ah wuxuuna u rogi karaa noocyo kala duwan oo qaab maqal ah,
Ku jawaab Mc
haddii ay shaqeyso laakiin si loo abuuro nooc acc ma aha badhanka midig, waa inaad doorataa heesta ka dibna riix feyl (bidix kore) iyo hoos-u-xulo xulasho beddelasho ka dibna aac. Abuur fayl muddada cusub ee la xulay iyo magaca heesta isla, ku jiido miiska, dib u cusbooneysii kordhinta (F2) (waxay kaa codsaneysaa inaad xaqiijiso inaad rabto inaad beddesho kordhinta, aqbal aqbal) waana intaas. Isku xirka iPhone iyo iskuduwaha codadka (dooro galka halka feylku ku yaal. Febraayo 2016
Isbarbardhig, OnePlus 2 vs iPhone 6